के मरेको मान्छे फेरी जिउँदो हुन सक्छ ? यस्तो छ रहस्य | Corporate Nepal
के मरेको मान्छे फेरी जिउँदो हुन सक्छ ? यस्तो छ रहस्य
एजेन्सीः स्पेनको आवीडो सहरमा एक पटक हंगमा भयो जब पोस्टमार्टम टेबलमा गोन्जालो मोटोया जिमेनेज नाम गरेको ‘डेड बडी’ हल्लिन लाग्यो । साथै, भारत मध्ये प्रदेशमा पनि महिना दिनकी नाबालिकाको मृत्यु भएको पुष्टि भएपछि बालिका फेरी मुस्कुराउन लागि तब सबै अचम्मित भए ।
दुनियामा यस्तो घटना प्राय सुनिराख्न पाइन्छ कि जब मृत घोषण भइसकेपछि फेरी जिउदो हुन्छन् । के तपाईलाई लाई थाहा छ यस्तो किन हुन्छ ?
के मृत मानिस फेरी जाग्छन् ?
मनोविज्ञानको दुनियामा ‘टेफोफोबिया’ नामक एक रोग यस्तो हुन्छ जस्मा मानिसको मृत्यु नभएपनि मृत जस्तो लाग्छ । एक यस्तो मेडिकल कंडीशन पनि रहेको छ की जस्मा मानिसलाई मृत ठानिए पनि अन्तिम संस्कार गर्नु पुर्व सुति राखेका मानिस बिउँझे जसरी उठ्ने गर्छन् ।
मानिसहरु यस्लाई चमत्कार भएको मान्छन् या त यस्लाई सुपरनेचुरल पावरसँग जोडेर हेर्ने गर्छन । तर, नेश्नल सेन्टर फर बायोटेक्नोलोजी इन्फरमेशन (एनसीबिआई) का अनुसार यो एक प्रकारको मेडिकल कंडीशन अर्थात ‘केटालप्सी’ भनिन्छ ।
केटाप्सी के हो ?
एनसीबिआईका अनुसार यस प्रकारको मेडिकल कंडीशनमा मुटुको धड्कन चलिराख्या छ या छैन भन्ने थाहा पाइदैन र डक्टरहरु पनि यस्मा झुकिने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा मुटु चलिरहेको छ या छैन भन्ने पत्ता लगाउन मुश्किल भएको अवस्थामा मानिसलाई मृत घोषि गरिन्छ । तर, मृत घोषणा गरेको केही समयपछि त्यो कंडीशन सकिन्छ र मानिस सामान्य तरिकामा सास लिन सुरु गर्छ ।
मनमोहन लगायत केहि अस्पताललाई सम्बन्धन दिने गरी उपसमितिले टुंग्यायो चिकित्सा शिक्षा विधेयक
दार्जिलिङमा फेरी हिँसा भड्कियो, एक सुरक्षाकर्मीसहित दुई आन्दोलनकारी मारिए
अदालतको आदेशलाई मानेर दुई वटा निर्वाचन फरक समयमा गर्नुपर्छः बार अध्यक्ष
विश्वमै पहिलो पटक सफल मुटु प्रत्यारोपण गर्ने ति सफल डा बर्नार्ड